အမှိုက်ပုံးတွေ.. ဘယ်မှာလည်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » အမှိုက်ပုံးတွေ.. ဘယ်မှာလည်း
Posted by three colors on Sep 24, 2011 in Complaint / Claim | 14 comments
ဒါ ဒုတိယအကြိမ် တင်ကြည့်ခြင်းပါ။ တိုတိုပဲပြောကြည့်ပါမယ်၊ ကျွန်တော် စင်ကာပူ ကပြန်လာခါစ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ်လောက်က အဖြစ်ကလေး။ ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာ အကြော် ဝယ်ပြီး လက်က ကိုင်စား လာခဲ့ပြီး ကုန်သွားတဲ့အခါ ဟိုကပါလာတဲ့အကျင့်ကလေးကရှိနေသေးလို့ ဆီပေနေတဲ့သတင်းစာ စာရွက်ကိုကိုင်ရင်း အမှုိက်ပုံးရှာမိပါတယ်။၂block,၃ block သာကျော်လာတယ်၊အမှိုက်လွှတ်ဘို့နေရာမှန်ကိုရှာမတွေ့ လို့လမ်းပေါ်ပဲချရပါတော့တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်လောက်က အမှိုက်ပုံးတွေblockတိုင်းမှာရှိခဲ့ဘူးပါတယ်၊အခုတော့—–။ ဒါတွေကြောင့်ရေမြောင်းတွေ ပိတ်တာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား???? စည်ပင်ဝန်ထမ်းတွေ အကုန်လုံး လှည်းထုတ်နိုင်လို့လား?????? အမှိုက်ပုံးတွေ ရှိဘို့မလိုဘူးလား????????်
ဟုတ်ပ ဒီအတိုင်းဆို ဆရာသမားလဲ သတိထားတော့နော်
ကျနော်တို့ နိုင်ငံ မှာ သေသေသပ်သပ်ကို ပျက်စီးနေကြလို့ပါ
အစိုးရက အမှိုက်ပုံးဖိုး မတတ်နိုင်လို့ပါ။ သည်းခံပေးကြပါ။ ဧရာဝတီမြစ်က ချောင်းဖြစ်သွားရင် သူတို့ အမှိုက်ပုံးဖိုး တတ်နိုင်ပြီး Block တိုင်းမှာ အမှိုက်ပုံးထားပေးမှာပါ။
ရေးသူက ၅ နှစ်က အဖြစ်လို့ဆိုထားပါတယ် ။ အခုထိပါဘဲ။
ှအများ သုံး အမိူက်ပုံးတော့ စည်ပင်ကမထားဘူး ၊ ဒါပေမဲ့ စည်ပင်လိုင်စင်ယူရတဲ့ဘယ်ဆိုင်မဆို အမိူက်ပုံးရှိကြောင်း ဓါတ်ပုံရိုက်တင်ပြရပါတယ်။ အဲ့ဒီပုံမပါရင် လိုင်စင်မရပါ။ဒါမှမဟုတ်..
(၁)့ လမ်းမှာ အမိူက်ပုံ အကြီးကြီးတွေရှိပြီးလို့ အမိူက်ပုံးမလိုတော့ခြင်း
(၂) အမိူက်ပုံးရှိသော်လည်း အမိူက်ပုံးအတွင်း မပြစ်တတ်သော ကျွန်တော်တို့ အများစုဖြစ်ခြင်း
(၃) အမိူက်ပုံး များအား အကျိုးရှိစွာ Recycle ပြုရု အခြားပစည်းများထုတ်လုပ်လိုက်ခြင်း
(၄)သဘာဝ အတိုင်းနေတတ်စေရန် စေတနာထား လေ့ကျင့်ပေးနေခြင်း
(၅) လုံခြုံရေး အရ ဗုံးများ အမိူက်ပုံးအတွင်းထည့်ထားနိူင်ခြင်း ……….
မန်းလေးမှာတော့ အမိူက်ပုံးထားပေးလဲ လူတွေကဖျက်ဆီးပစ်တယ် ခိုးသွားတယ် ။လမ်းသွားလမ်းလာတွေကလဲ လမ်းဘေးမှာအလွယ်တကူပစ်တယ် ကွမ်းသွေးထွေးတယ်လေ။
တိုက်ခန်းမှာနေသူတွေကလဲ နောက်ဖေးလမ်းကြားမျာ အမိူက်ချတယ်။
အဲတော့ ကျနော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေဖက်ကလဲ ပြင်ဘို့လိုတယ်။
တဆက်တည်းကျနော်ကိုယ်တွေပြောပြချင်းပါသည်၊ မဂိုးလမ်းထိပ်မှာပေါ~ ရွှေဘုံသာလမ်းစူးပါဝမ်းမှာ အအေးပုလင်ဝယ်သောက်ပြီးလွှတ်ပစ်ဖိုအမှိုက်ပုံးလိုက်ရှာတာမတွေလို~ အနီနားမှ
ရှိတဲ့ကပ်ထူးပုံးအလွတ်မှာသွားထည်မိလို~ အနားကပျံကျဈေးသည်၏အဟောက်ကိုခံလိုက်ရပါသည်၊ ၄င်းကပ်ထူးပုံမှာလည်ဘာမျှမရှိပါ~ အမှိုက်လိုသတင်းစာစက္ကူ အဟောင်းတချို့ပဲတွေရပါသည်။ ထိုကြောင်ကျနော်ကလဲအမှိုက်လိုသဘော
ကျနော်ကိုဟောက်သောေ ဈးသည်ရဲအမှုအရာကို ကျနော်အမေက အစအဆုံးမြင်ပြီးကျနော်တို
၂ယောက်နားကိုရောက်လာပြီး အမေကပြောတယ်ငါတို့ကစည်ပင်သာယာရေး၏စည်းကမ်းလိုက်
နာပြီးလွှတ်ပစ်တာဆိုပြီး ၄င်း၏စက္ကူးပုံထဲကကျနော်ပစ်ထားသော ပုလင်ကောက်ပြီးပြန်လာတော၎င်းပျံကျ
ဈေးသည်ဟာအမျိုးသား တယေက်ပါ၊ ကျနော်ကတောကိုယ်အမှားပါ ဆိုပြီးတောင်းပန်နေမိပါသည်၊စည်ကမ်း
လိုက်နာလွန်းတောလည်~ လူတန်းစားစကာပြောမည်ထင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ သားအမိထွက်ခွားသွားတော့၎င်းအမျိုးသာဈေးသည်ဟာ ပါစပ်အဟောင်းသာလေးနဲကျန်ခဲပါတောသတည်း။
တချိန်တုန်းက စည်ပင် ဆိုင်စည်းကမ်း မလိုက်နာတဲ့ ဆိုင်တွေကို ဒဏ်တပ်တဲ့အနေနဲ့ လမ်းဘေး အမှိုက်ပုံး ၁၀ ပုံးနှုန်းနဲ့ ဒဏ်ရိုက်ဖူးတယ် .. တပုံးကို ၁ သောင်းနှုန်း ယူတယ် ဓါတ်တိုင် ၃ တိုင်ကြား တလုံး ချထားပေးတယ် .. ဒါပေမယ့် စည်းကမ်းကို ထိန်းသိမ်းတဲ့ စည်ပင်က အမှိုက် လာမသိမ်းပါ ..
နောက်ပိုင်း အမှိုက်ကောက်တဲ့ လူတွေကပဲ အမှိုက်ပုံးပါ ကောက်သွားတော့ လမ်းဘေး အမှိုက် ပစ်စရာ မရှိတော့ပါ ..
အမှိုက်ပုံကတော့ အမှိုက်သိမ်းကားတွေ အချိန်မီ မလာလို့ ကြီးလာတာ
အမှိုက်သိမ်းကားတွေက လောင်စာဆီ ပြတ်သွားလို့ မလာတာပါ
လောင်စာဆီက လူကြီး လာယူသွားလို့ မရတာပါ
လူကြီးက အိမ်က မိန်းမ ပူဆာတာ ၀ယ်ဖို့ ယူသွားတာပါ
အိမ်က မိန်းမက သူများ ကတော်တွေနဲ့ ပြိုင်ချင်လို့ ပူဆာတာပါ
သူများကတော်တွေကလဲ အထက်က လူကြီးကတော်တွေ ၀တ်စားတာတွေ့ပြီး အားကျလို့ ၀တ်ကြည့်ကြတာပါ
အထက်လူကြီးကတော်တွေကလဲ လူကြီးတွေ မျက်နှာငယ်မှာစိုးလို့ ၀တ်စားပြရတာပါ
လူကြီးတွေကလဲ ငါတို့ တိုင်းပြည် ချမ်းသာပါတယ် ဆိုတာကို ပြချင်လို့ပါ
အမှိုက်က စ စဉ်းစားမိသလောက် ရေးကြည့်တာပါ
၂block,၃ block သာကျော်လာတယ်၊အမှိုက်လွှတ်ဘို့နေရာမှန်ကိုရှာမတွေ့ လို့လမ်းပေါ်ပဲချရပါတော့တယ်။
တကယ်တော့.. အမှိုက်ပစ်စရာအမှိုက်ပုံးမတွေ့မချင်းရှာ.. ဒါတောင်မှမတွေ့ရင်..လက်လျှော့ပြီး.. အိမ်ပြန်သယ်လာပြီး.. ကိုယ့်အမှိုက်ကိုယ့်အိမ်မှာပစ်ဖို့ပဲ..။( အိမ်မှာပါ..အမှိုက်ပစ်ထားတာကို အမှိုက်ပုံး..လာမသိမ်းရင်တော့.. )
စည်းကမ်းကို ..သူဖေါက်လို့ကိုယ်ဖေါက်တယ်..ဆိုတာကတော့.. (တရားဝင်ပြောရရင်).. . ကောင်းတာတော့မဟုတ်..။
မြူနီစပယ်နဲ့.. စည်းကမ်းမလိုက်နာရင်..ဖမ်းဖို့.. လူထုကတာဝန်ပေးထားတဲ့..ရဲကလည်း.. ဌာနတူတာမဟုတ်..။
သူကြီးပြောတဲ့ “တကယ်တော့.. အမှိုက်ပစ်စရာအမှိုက်ပုံးမတွေ့မချင်းရှာ.. ဒါတောင်မှမတွေ့ရင်..လက်လျှော့ပြီး.. အိမ်ပြန်သယ်လာပြီး.. ကိုယ့်အမှိုက်ကိုယ့်အိမ်မှာပစ်ဖို့ပဲ..။.”.ဆိုတဲ့အချက်လေးက ရှိးရှိးလေးနဲ့ အထိရောက်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဖို့စည်းကမ်းလေးပါပဲ။
အခှကျွန်တော်တို့မီဒီယာတွေ၊ ပြည်သူတွေ မြစ်ဆုံဆည်အရေး မှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် မပျက်စီးရေး ကိုဇောင်းပေးပြီး အဓိက၀ိုင်းပြောခဲ့ကြတယ်၊ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့မှာတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတကယ်ချစ်ပြီး အလေးထားထိန်းသိမ်းတာ အားနဲကြပါတယ် .။
ဒီတော့ နောက်ထပ်အလားတူဖြစ်ရပ်တွေ ဖြစ်လာခဲ့ရင်.ဖြစ်နေသေးတာတွေကို ထပ်ပြီးတားဆီးဖို့အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးမှာ
* နိုင်ငံခြားလဲ မရောက်ဘူးပါ..ပြည်တွင်းမှာပင်နေပြီး စည်းကမ်းမဲ့အမှိုက်ပစ်ရမှာကို.ရှိးရှိုးလေးပင်ရှက်ပါသည်။
အမှိုက်မပုံရဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်လေးတွေ အမှိုက်ပုံအောက်ရောက်နေတာ တော်တော်များများတွေ့နေရတယ်
ကိုယ့်အိမ်ကအမှိုက်ကို ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲစိစစ်ပြီးတော့ recycle လုပ်လို့ရတာတွေပြန်လုပ်
တစ်ခါသုံးပစ္စည်းတွေလျှော့ ရေသန့်ဘူးနဲ့အချိုရည်ဘူးခွံတွေကို အိတ်တစ်လုံးနဲ့ထည့်ပြီး အိမ်ရှေ့မှာချိတ်ထားပေးလိုက်
လမ်းသွားရင်တော့ အမှိုက်ပုံးမတွေ့ရင်ကိုယ့်အိတ်ထဲကိုယ်ထည့်ပြီး အိမ်ရောက်မှပစ်လိုက်ပေါ့
သီအိုရီ က ဘာဘူတို့ ဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းတောင် ရှိသေး
“ အမှိုက်မပစ်နဲ့ အမှိုက်မပစ်နဲ့ စည်းကမ်းရှိပါ စည်းကမ်းရှိပါ ”
ဘာ ကွ…အမှိုက်ပုံး….ဟုတ်စ…အမှိုက်မြောင်းတွေ နိုင် ငံတော်က လုပ်ပေးပြီးပြီလေ။အိမ် ကမိန်းမ စိန်နားကပ် ပူဆာ လို. စိတ်ညစ် ၇တဲ. အထဲ။
ဤသို့ဖြင့်တရွာလုံးသူကြီးအမိန့်နှင့်အမှိုက် ပုံ ကြလေ၏။
ုဆိုင်တိုင်း မှာဓါတ်ပုံတင်ပြရတယ်ဆိုပေမဲ့အခုလဲဆိုင်အနည်းငယ်ကသာ လိုက်နာ တာသတိထားမိတယ်၊
ဘယ်သူမှ ညစ်ပေနေတဲ့အမှိုက်ကို ပုံးမတွေ့မချင်းကိုယ့်အိတ်ထဲပြန်ထည့်ပြီး အိမ်အထိပြန်သယ်မယ်မထင်ဘူး ။ိ
နဂိုကတည်းက ဒီလိုမပစ်တတ်ခဲ့သူတွေကိုလေ့ကျင်ပေးဘို့ဆိုတာတော့ ဝေးပြီပေါ့။
လမ်းမပြောင်ကြီးမှာ … အမှိုက်ပစ်ချလိုက်ရမှာ .. … အားနာသလိုဖြစ်တာကြောင့် ……အမှိုက်ပုံးတွေတဲ့နေရာရောက်တဲ့အထိ သယ်တယ်… တစ်ခါတစ်လေ … ကိုယ့်အိတ်ထဲ ပြန်ထည့်သယ်တယ် .. ဒါပေမဲ့ .. နှပ်ချီး ညှစ်လိုက်တဲ့ တစ်ရှူးတို့ .. … ဘာတို့ကိုတော့ …. သွားလေရာ ကိုင်မထားနိုင်လို့ … အမှိုက်ပုံးမတွေ့လည်း .. တွေ့တဲ့နေရာ ပစ်မိတယ်
အဓိကကတော့ … အမှိုက်ပုံးထားပေးဖို့နဲ့ … ထားတဲ့ အမှိုက်ပုံးကို စနစ်တကျပြန်သိမ်းပေးဖို့ပါပဲ … ။ အမှိုက်ပုံးမြင်လျှင် စနစ်တကျ အမိုက်ပစ်ချင်တဲ့ လူတွေ များလာမှာပါ … ။